အက်﻿ပီဖနီ (ခင်﻿﻿အောင်﻿﻿အေး) | လမ်းအိုလေး
October 4, 2015 by lanolay	Leaveacomment
တခါခါကျတော့လည်း ၀မ်းနည်းမိသလိုလို ရင်နာမိသလိုလိုခံစားရ။
ဘ၀မှာ ကဗျာနဲ့ ငြိတွယ်ခဲ့မိရတဲ့ အပေါ်မှာပေ့ါ။ ဘယ်သူမှ ရိုက်နှက်ပြီးတော့ ခိုင်းခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခံရတာလည်း မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်က အလိုတူအလိုပါ၊ လူတွင်ပါလို့
﻿ချွေး﻿တွေသံ﻿တွေနဲ့ပါ …. အက်﻿ပီဖနီ
အယ်﻿လင်﻿ နွံ﻿တောကြီးဆီမှာ ကျဆင်း﻿နေ (ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ)
ဟိုအ﻿နောက်﻿တစ်﻿﻿ကြောက ရှန်﻿နန်﻿﻿တောင်﻿﻿ကြောမှာလည်း (ဖြည်းဖြည်းချင်း ကျ﻿နေတယ်﻿)
ဗျာဒိတ်﻿သ﻿ဘောဖြင့်﻿ မယူ﻿တော့ပဲ ﻿ဖော်﻿ထုတ်﻿ခြင်း ‘မင်းကို ကိုယ်﻿ချစ်﻿တယ်﻿ အက်﻿ပီဖနီ’
﻿ဗျာဒိတ်﻿သ﻿ဘော မဟုတ်﻿လည်းပဲ မင်းကိုကိုယ်﻿ ချစ်﻿နိုင်﻿ပါတယ်﻿
﻿ကောင်း﻿ကောင်းကြီး ချစ်﻿နိုင်﻿ခဲ့တယ်﻿ အလွန်﻿အကျွံကို ချစ်﻿နိုင်﻿ခဲ့တယ်﻿
﻿မော်﻿﻿တော်﻿ကား ﻿မောင်းသွားတဲ့ လမ်းတစ်﻿﻿လျှောက်﻿လုံးမှာ ကိုယ်﻿ချစ်﻿﻿နေခဲ့တယ်﻿
ဒါတင်﻿ ဘယ်﻿ကဦးမလဲ ရှန်﻿နန်﻿﻿တောင်﻿﻿ကြောကို ဖြတ်﻿ဆင်းသွားပြီးတဲ့﻿နောက်﻿မှာလည်း မင်းကိုချစ်﻿﻿နေဆဲပဲ
မင်းကိုချစ်﻿တဲ့ အချစ်﻿ဟာ ﻿တောင်﻿﻿ပေါ်﻿ရှေး﻿ဟောင်း Church တစ်﻿ခုက
အဆက်﻿မပြတ်﻿ ထိုးလိုက်﻿တဲ့ ﻿ကြေကွဲ﻿ခေါင်း﻿လောင်းသံလိုပဲ
ရုတ်﻿တရက်﻿ နားလည်﻿လိုက်﻿ရခြင်းကို ပုတီးလို မင်းလည်﻿မှာ ဆွဲထားတယ်﻿
တုံ့﻿နှေး﻿နှေး ထုံ့ပိုင်းပိုင်း ဘယ်﻿ကိုမှမ﻿ရောက်﻿မယ့်﻿ ခရီးဆီ ကိုယ်﻿တို့ ပျံသန်းဖို့ အရှိန်﻿ယူခဲ့ကြ
အ﻿ခြေခံသိမှတ်﻿ခံစားနိုင်﻿မှုမှာ အ﻿ခြေပြုထားပြီး﻿တော့ ကိုယ်﻿တို့ ဖုန်းထဲမှာ ﻿ပြောကြတယ်﻿
ဇန်﻿နဝါရီ ၆ ရက်﻿﻿နေ့ မင်းသုံးပါးပွဲမှာ ပြန်﻿ဆုံကြရ﻿အောင်﻿ အက်﻿ပီဖနီ (ချိန်း ဆိုခဲ့ဖူးတယ်﻿)
စိတ်﻿၊ ဝညာဥ﻿တော်﻿မှ ရုတ်﻿ခြည်း﻿ဖော်﻿ထုတ်﻿﻿ပေးချက်﻿နဲ့ ကိုယ်﻿တို့ နမ်းရှိုက်﻿ကြမယ်﻿
နွယ်﻿ငင်﻿ဆက်﻿စပ်﻿﻿နေတဲ့ အ﻿ကြောင်းအရာ﻿ပေါင်းများစွာနဲ့ ﻿ကောင်းကင်﻿﻿ပေါ်ကိုပျံတက်﻿ကြမယ်﻿
တစ်﻿စုံတစ်﻿ရာ ရှိနှင့်﻿ခဲ့ပြီးသား﻿တွေအ﻿ပေါ်မှာ အ﻿ခြေခံပြီး စ﻿တွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့﻿နေ့ကို မ﻿မေ့ဘူး
လူရွယ်﻿တစ်﻿ဦးအဖြစ်﻿ ﻿တွေ့ရှိရ﻿သော အနုပညာသည်﻿တစ်﻿ဦး၏ ပုံရိပ်﻿လို သြဇာတိက္ကမ
ဂျွိုက်﻿စ်﻿က ﻿ဖော်﻿ထုတ်﻿ပြခဲ့﻿သော အ﻿ကြောင်းတစ်﻿ရပ်﻿မှာ အက်﻿ပီဖနီ (Epiphany) ဖြစ်﻿သည်﻿
အဲဒီ﻿တော့ မင်းကိုကိုယ်﻿ချစ်﻿တယ်﻿ အက်﻿ပီဖနီ မင်းကို ﻿ကောင်း﻿ကောင်းကြီး ကိုယ်﻿ချစ်﻿ခဲ့တယ်﻿
ကာလတရားတစ်﻿ခုခု၊ စိတ်﻿အာရုံ အစရှိသည်﻿တို့မှ တစ်﻿ခုခု ည﻿နေခင်း﻿တွေမှာ
ခပ်﻿လွယ်﻿လွယ်﻿ ဇာတ်﻿﻿ကောင်﻿၏သိမှု သို့မဟုတ်﻿ အက်﻿ပီဖနီဆီက မက်﻿﻿ဆေ့ခ်ျ﻿ တစ်﻿ခုခု
စကားတစ်﻿ခွန်းဖြင့်﻿ နမူနာပြပါရ﻿စေ သူ﻿ပေါက်﻿တတ်﻿ကရ ﻿ပြောဆိုခဲ့တာ﻿တွေ နှင်း﻿တွေထဲမှာ
လမ်းခွဲနှုတ်﻿ဆက်﻿ခဲ့ကြတာ﻿တွေ တိတ်﻿ဆိတ်﻿﻿နေ﻿သောည၏ ဟိုတယ်﻿အခန်းအတွင်း
ကိုယ့်﻿ရဲ့ အက်﻿ပီဖနီဟာ ﻿ကျော့ရှင်းတဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်﻿ကို တွန့်﻿လိမ်﻿﻿ကွေးညွတ်﻿လိုက်﻿ရင်း
‘ဆရာ …’ ‘…’ ‘….’
(မ﻿ပြောဖြစ်﻿﻿သော စကားလုံးများကို ﻿ဖော်﻿ပြလိုက်﻿ခြင်း ဖြစ်﻿သည်﻿ဟု ဆိုကြသည်﻿)
ဆိုလိုရင်းမှ ဖယ်﻿ခွာသွား﻿တဲ့ ငှက်﻿တစ်﻿﻿ကောင်﻿အတွက်﻿မူ အက်﻿ပီဖနီက ﻿ဆွေး﻿နွေးရန်﻿ မရှိပါတဲ့
ယုတ္တိနည်းလမ်းတကျ ဆင်﻿ခြင်﻿ခြင်းမျိုး အယ်﻿လင်﻿ရဲ့ နွံ﻿တောကြီးဆီမှာ ကျဆင်း﻿နေတာ
﻿တောင်﻿﻿ယောင်﻿﻿ယောင်﻿ ﻿မြောက်﻿﻿ယောင်﻿﻿ယောင်﻿ ဟိုမ﻿ရောက်﻿ ဒီမ﻿ရောက်﻿နဲ့ နာရီများ၊ ﻿နေ့များ
မှန်﻿﻿သော်﻿လည်း အင်﻿အားကုန်﻿ခန်း﻿နေတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းများနဲ့ ﻿ပြောဆို﻿နေခြင်းများ
‘တိမ်﻿စိုင်﻿ခဲ﻿လေးတစ်﻿ခု’နှင့်﻿ ‘ချစ်﻿ခြင်း’မှာ ‘နာကြည်းဖွယ်﻿ ဖြစ်﻿ရပ်﻿တစ်﻿ခုမျှ’ ပါပဲ﻿လေ
ဒုက္ခိတဘဝသို့ ﻿ရောက်﻿ရန်﻿အတွက်﻿ ဗဟိုချက်﻿သာ ဖြစ်﻿﻿တော့သည်﻿ မအက်﻿ပီဖနီ
စားသုံးရန်﻿ မသင့်﻿﻿တော်﻿﻿သော ကိုယ့်﻿အချစ်﻿များဖြင့်﻿ ပြန်﻿လည်﻿တင်﻿ပြရန်﻿ အလွန်﻿ခက်﻿ခဲပါသည်﻿။
﻿စေ့﻿ဆော်﻿မှု တစ်﻿စုံတစ်﻿ရ﻿ကြောင့်﻿သာ ကိုယ်﻿တို့ ﻿တွေ့ဆုံချစ်﻿ကျွမ်းဝင်﻿ သမုဒယ တွယ်﻿ငင်﻿ခဲ့ကြပါသည်﻿
ခု﻿တော့ ကိုယ့်﻿မှာ ﻿ချွေး﻿တွေသံ﻿တွေနဲ့ ရင်﻿ဆိုင်﻿﻿တွေ့ဆုံရခြင်း တစ်﻿ခုနဲ့ ထက်﻿သန်﻿မှု စွန့်﻿စားလိုမှု
ကိုယ်﻿﻿ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ အက်﻿ပီဖနီ ဗျာဒိတ်﻿သ﻿ဘော မဟုတ်﻿လည်းဘဲ ကိုယ်﻿မင်းကို ချစ်﻿နိုင်﻿တယ်﻿ ဆိုတာ
ကျွမ်းကျင်﻿ပါးနပ်﻿ပီး သိမ်﻿﻿မွေ့စွာ မင်းရဲ့ လှည့်﻿ဖျား﻿ဆော့ကစားသွားမှုမှာ စီးပိုး﻿နေခဲ့﻿ကြောင်း
﻿ပြောင်းလဲခြင်း ကင်းပ﻿သော အညို﻿ရောင်﻿ မျက်﻿နှာများဖြင့်﻿ရစ်﻿ခ်ျ﻿မွန်﻿ ﻿မြောက်﻿ဖက်﻿လမ်းအတိုင်း။။
၉ ဧပြီ ၂၀၁၄ ဗဟိုရ်﻿လမ်း ﻿ကျောက်﻿﻿မြောင်း ၂၀၄၄ နာရီ
မြင့်﻿သန်းရဲ့ (စာဖတ်﻿သူရဲ့ အခန်းကဏ္ဏကို ထည့်﻿သွင်းစဉ်းစားတဲ့ စာ﻿ပေအမြင်﻿) စာအုပ်﻿ကို ဖတ်﻿﻿နေရင်း စာမျက်﻿နှာ ၁၉၀ မှာ Epiphany ဆိုတဲ့ စကားလုံး﻿လေးကို ﻿တွေ့တယ်﻿။ ﻿တွေ့လျင်﻿﻿တွေ့ခြင်းပဲ ဘာရယ်﻿မဟုတ်﻿ စိတ်﻿ထဲ ငြိသွားတယ်﻿။ ဒီစကားလုံး﻿လေးနဲ့ ကဗျာ﻿ရေးဦးမယ်﻿လို့ ﻿တေးထားလိုက်﻿﻿တယ်﻿။ တယ်﻿﻿ရေးချင်﻿တာက ကိုယ်﻿ပိုင်﻿စကားလုံး စာသား အဖွဲ့အနွဲ့﻿တွေနဲ့ချည်း (ဒါလဲ ငြင်းချက်﻿ထုတ်﻿စရာ တစ်﻿ခုပဲ) ﻿ရေးဖို့ လိုင်းဖွင့်﻿ကာစမှာတင်﻿ သူ့ဆီက စာသား﻿တွေ ယူသုံးမိရင်းက လွှဲ﻿ရှောင်﻿လို့ မရ﻿တော့ပဲ ‘ဂျွိုက်﻿စ်﻿နှင့်﻿ ဒဗ္ဗလင်﻿မြို့မှ လူများ’ စာမျက်﻿နှာ ၁၈၈ မှ ၂၀၃ အတွင်းမှ လိုရာစာားများကို ဖြတ်﻿ညှပ်﻿ကပ်﻿ယူ သုံးဖြစ်﻿ ဖန်﻿တီးဖြစ်﻿ ‘ကဗျာလုပ်﻿ဖြစ်﻿’ သွားခြင်း ဖြစ်﻿ပါ﻿ကြောင်း။
( အက်﻿ပီဖနီ – ခင်﻿﻿အောင်﻿﻿အေး။ ၂၀၁၅ – ﻿လှေကားစာ﻿ပေ။)
Categories: Kabyarz | Tags: ခင်﻿﻿အောင်﻿﻿အေး, အက်﻿ပီဖနီ, collage, Epiphany, Kabyarz, Khin Aung Aye | Permalink.
စောင်းကြိုးပြတ်ရွာ - မွန်းတည့်အလွန် ၄နာရီ (တာရာမင်းဝေ)
ချစ်လှစွာသော လောကဓံတရား (မောင်ချောနွယ်)
ချာတိတ်ကလေး တစ်ယောက်အကြောင်း (မင်းခိုက်စိုးစန်)